Indlela Yokumaketha Nokukhuthaza Umcimbi Wakho Olandelayo Ku-inthanethi | Martech Zone
Sesike sabhala phambilini ukuthi ungayisebenzisa kanjani imithombo yezokuxhumana ukumaketha umcimbi wakho olandelayo, nokucaciswa okuthile kokuthi isetshenziswa kanjani I-Twitter ukukhuthaza umcimbi. Saze sabelana nge- uhlelo lokumaketha umcimbi.
Lokhu infographic kusuka kuDathaHero, kepha, inikezela ngemininingwane emnandi ekusebenziseni i-imeyili, iselula, usesho nezenhlalo ukukhuthaza nokumaketha imicimbi yakho.
Ukwenza abantu beze emcimbini wakho akukhona nje ukwenza umcimbi uqobo ube mnandi, kufanele uwumakete ngendlela efanele. Lokhu kwe-infographic kukuhambisa ngemikhuba emihle yokuthi ungawuthengisa kanjani umcimbi wakho online, kusuka ekumaketheni kwe-imeyili, ekukhuliseni umphakathi, ekusebenziseni izinjini.
Nayi eminye imikhuba emihle egqanyisiwe yokumaketha umcimbi wakho online
imeyili Marketing - Sebenzisa izithombe nama-imeyili aphendula amaselula ngamazinga wokubhalisa akhuphukile.
Ukukhangisa Kwamaselula - Inani elikhulayo lokubhalisa livela kudivayisi ephathekayo ngakho-ke qinisekisa ukuthi ikhasi lakho lokubhalisa lilungiselelwe ukubukwa kweselula.
Search injini - Lungiselela ikhasi lomcimbi wakho ngamagama angukhiye asebenzayo bese usebenza ukuzama ukuthola okushiwo kwamanye amasayithi afanele okungenani amasonto ama-4 ngaphambi komcimbi wakho ukuze uzame ukulinganisa kahle.
Social Media Marketing - dala i-hashtag eyingqayizivele futhi ukhuthaze ukuzibandakanya ezinkundleni zokuxhumana ngaphambi naphakathi nomcimbi wakho ngezibuyekezo ezithile ngemuva kwawo.
Tags: imikhuba engcono kakhuluumcimbiukudayiswa komcimbiizindlela ezinhle kakhulu zokumaketha imicimbiizindlela ezinhle kakhulu zokumaketha i-imeyiliukukhuthazwa kokumaketha umcimbiumcimbi weselulaukumaketha kwamaselula omcimbiukubuyekezwa komcimbiUkusebenziseka kahle kwenjini yokuseshaumcimbi seoizenzakaloungawuthengisa kanjani umcimbi wakho onlineungawukhuthaza kanjani umcimbi onlineukumaketha komcimbi oku-inthanethiukukhuthazwa komcimbi oku-inthanethi
Izikhangiso zevidiyo yeselula zimayelana nodaba ngaphandle kokuthengiswa